China XMT-608 Series Universal Inzwa Zvinotaurwa Type Intelligent Temperature Controller Manufacturer uye mutengesi | Gongyi
Akangwara Temperature Controller
Universal Inzwa Zvinotaurwa Type Intelligent Temperature Controller
Single Inzwa Zvinotaurwa Type Intelligent Temperature Controller
Njere programmable Temperature Controller
Multi Way Intelligent Temperature vaifamba Detective Controller
Bhatani Pointer Temperature Controller
Bumburudzi Pointer Temperature Controller
Ziva Humidity Controller
Akangwara Temperature And Humidity Controller
Akangwara LCD Temperature And Humidity Controller
Njere PID Temperature And Humidity Controller
Njere Two Step Temperature And Humidity Controller
Industrial mhando Temperature Switch
Pressure Type Temperature Switch
Screw Type Temperature Switch
Tube Type Temperature Switch
Simple Type Temperature Switch
Single Humidity Switch
CU50 High Morekuru Temperature And Humidity Switch
PT100 High Morekuru Temperature And Humidity Switch
PT100 PT100 Temperature And Humidity Switch
Ziva Time ataure
Single Time Control Intelligent Time ataure
Double Time Control Intelligent Time ataure
Digital Display Time ataure
Single Time Control Digital Display Time ataure
Double Time Control Digital Display Time ataure
SBW Series Temperature Rinofambisa
UYU Voltage Regulator
ZK mhando UYU voltage regulator
Three-Pasika Multi-shanda Panel Meter
ZW Series Three-Pasika Multi-shanda Panel Meter
ZK Type UYU Voltage Regulator
XMT-3000 Series Single Inzwa Zvinotaurwa Type Intelligent Hasha ...
FC-040 Single Inzwa Zvinotaurwa Type Intelligent Temperature Con ...
XMT-908 Series Universal Inzwa Zvinotaurwa Type Intelligent Temp ...
XMT-808 Series Universal Inzwa Zvinotaurwa Type Intelligent Eyl ...
XMT-608 Series Universal Inzwa Zvinotaurwa Type Intelligent Eyl ...
XMT-308 Series Universal Inzwa Zvinotaurwa Type Intelligent Eyl ...
EU-08 Universal Inzwa Zvinotaurwa Type Intelligent Temperature ...
XMT-608 Series Universal Inzwa Zvinotaurwa Type Intelligent Temperature Controller
XMT * 608 dzino Intelligent Temperature Controller Operation InstructionⅠ, SurveyThanks nokuda kwenyu pakusarudza kwedu XMT * 608 dzino akangwara tembiricha controller.XMT * 608 dzino akangwara tembiricha controller, ndizvo kaviri mutsara 3-akatungamirira akaratidza ukuwo vanoratidza tembiricha chipimo ukoshi ...
XMT * 608 dzino Intelligent Temperature Controller
Tinotenda kuti pakusarudza kwedu XMT * 608 dzino akangwara tembiricha controller.
XMT * 608 dzino akangwara tembiricha controller, ndizvo kaviri mutsara 3-akatungamirira akaratidza ukuwo vanoratidza tembiricha chipimo ukoshi (PV) netembiricha wakatarwa (SV) pasi kwomuzvarirwo rudzi; Kana nguva tembiricha kuzvidzora, ukuwo vanoratidza tembiricha chipimo ukoshi (PV) uye kumhanya nguva kuverenga pasi (SV), uyewo kupa mhando nguva kudzora nzira kusarudzwa; The controller anogona chiyamuro marudzi chiratidzo dzinoshandiswa uchitsanangura, izvozvo nemafungiro ON / Off (P ​​= 0 时), PID kuzvidzora, vachibvumira nyore parameter marongero uye yakakodzera inputting, rinoshandiswa zvikuru pamusoro tembiricha otomatiki kudzora mugadziriro michina, makemikari, Ceramics, chiedza maindasitiri, simbi, petrifaction nokupisa kurapwa uye zvichingodaro.
Ⅱ, Main rwokugadzira maindex
1, Kuyerwa kutsauka: ± 0.5F · S ± 1, mamwe magumo inotonhora compensating kutsauka ± 1 ℃
2, Inzwa Zvinotaurwa (zvinogona kusarudzwa): CU50 (-50 ~ 150), PT100 (-80 ~ 600), K (-30 ~ 999), E (-30 ~ 700),
3, ataure goho (nyararisa) kuonana vanokwanisa: AC250V 5Mumwe (nemishonga mutoro) nguva 2 ~ 120s zvinogona kugadziridzwa.
4, Time siyana: 0 ~ 999s kana 0 ~ 999m (zvinogona kusarudzwa)
5, Driving hwakasimba ataure chiratidzo goho: Driving Magetsi> 15mA hapana-mutoro voltage> 12V, nguva iri pamusoro 2S.
6, Work simba: 110V ~ 242V, 50HZ Power rakawanda <3W
7, Work ezvinhu: 0 ~ 50 ℃, hama humidity≤85%, pasina kukanganisa uye simba yemagetsi nemwaranzi.
Ⅲ, Controller remadziro
1, Controller emadziro (nokuti bhuku) 2, Connection (nokuti bhuku)
★ Controller ' S dzakananga kubatana inofanira kusimbisa kuti nyaya ' kubatanidza S
Ⅳ, Meaning of muenzaniso remitemo
1: pemvura divi
Blank: 160 × 80 × 85 Installation buri 156 × 76
A: 96 × 96 × 80 Installation buri 92 × 92
D: 72 × 72 × 80 Installation buri 68 × 68
E: 48 × 96 × 75 Installation buri 44 × 92
F: 96 × 48 × 75 Installation buri 92 × 44
G: 48 × 48 × 110 Installation buri 44 × 44
S: 80 × 160 × 85 Installation buri 76 × 156
B : 60 × 120 × 90 Installation buri 56 × 116
L: Standard DIN35mm gwaro nzira chokugadza
C : 80 × 120 × 35 rusvingo yakatarwa chokugadza
2: Operation akaratidza nzira: '6' 3-anokosha zvinyoronyoro achapesana-chinja ezvinhu, kaviri mutsara 3-akatungamirira digitaalinen kuratidzwa, PID kuzvidzora.
3: Zvimwe aramu:
'0' hapana aramu;
'1' yokumusoro muganhu aramu (yokumusoro kutsauka aramu kana nguva tembiricha kuzvidzora)
4: Inzwa Zvinotaurwa : '8' chiyamuro chiratidzo anogona Kukurudzirana akasununguka (hapana voltage uye ano chiyamuro)
5: Suffix Blank: ataure goho G: hwakasimba ataure goho T: Time kudzora shanda
1, Ita controller kubatana nesimba rezvokudya, Switch uye kuzvidzora loop, uye kuti simba iri, kuti controller ichatanga achiisira pacharo kuti 1S.
2, Ndapedza kuisa pacharo, iro controller achapinda kwomuzvarirwo pedengu mamiriro, yokumusoro mutsara PV hwindo vanoratidza pedengu kukosha, rezasi mutsara SV hwindo kuratidza wakatarwa.
3, chokutanga Muterere The
A, Time wakatarwa nadzurudzo
Common tembiricha kuzvidzora muoti: Press ▲ kana ▼ kuti 3s yokugadziridza wakatarwa, yokumusoro mutsara PV hwindo vanoratidza kuyerwa kukosha, rezasi mutsara SV hwindo vanoratidza wakatarwa, wokudhinda ▲ kana ▼ yokugadziridza, refu nguva rokumanikidza anogona mhanyisa ndinoiitawo kana kubvisa . Mushure nadzurudzo, wokudhinda Isai kuponesa mbudo. Kana regai kumanikidza chero kiyi, izvozvo achaponesa uye anongoerekana kwaita pashure 10s.
Time kuzvidzora muoti: Press ▲ kuti 3s kupinda tembiricha kuisa ukoshi nadzurudzo mamiriro, yokumusoro mutsara PV hwindo vanoratidza parameter nzeve "", rezasi mutsara SV hwindo vanoratidza parameter kukosha, wokudhinda ▲ kana ▼ yokugadziridza, refu nguva rokumanikidza anogona mhanyisa ndinoiitawo kana kubvisa. Mushure nadzurudzo, wokudhinda Isai kuponesa mbudo. Kana regai kumanikidza chero kiyi, izvozvo achaponesa uye anongoerekana kwaita pashure 10s.
★ B, Time wakatarwa nadzurudzo (kana iri nguva & tembiricha kudzora)
Press ▼ nokuti 3s kupinda nguva akaisa ukoshi nadzurudzo mamiriro, yokumusoro mutsara PV hwindo vanoratidza parameter nzeve "", rezasi mutsara SV hwindo vanoratidza parameter kukosha, wokudhinda ▲ kana ▼ yokugadziridza, refu nguva rokumanikidza anogona mhanyisa ndinoiitawo kana kubvisa. Mushure nadzurudzo, wokudhinda Isai kuponesa mbudo. Kana regai kumanikidza chero kiyi, izvozvo achaponesa uye anongoerekana kwaita pashure 10s.
Inner parameter marongero (hwakadzama anotaura Sheet5-1)
(1) Muterere yechipiri
Press wakasiyirwa 3s kupinda yechipiri Muterere, yokumusoro mutsara hwindo vanoratidza parameter code, rezasi mutsara hwindo vanoratidza parameter kukosha, wokudhinda ▲ kana ▼ yokugadziridza, refu nguva rokumanikidza anogona mhanyisa ndinoiitawo kana kubvisa. Mushure nadzurudzo, wokudhinda Isai kuponesa mbudo. Kana regai kumanikidza chero kiyi, izvozvo achaponesa uye anongoerekana kwaita pashure 10s.
(2) The wechitatu Muterere
Press Isai + ▲ kupinda wechitatu Muterere, kuisa nzira kwakafanana kumusoro.
4, Kuronga pacharo
First kuisa yakatarwa kukosha, uye ipapo kupinda Muterere, wakaiswa kuti, At chiedza iri, ari controller kupinda pakururamisa pacharo mamiriro, akaisa kudzoka musiyano anenge 0.5 ~ 1 , pano controller iri ON / Off kuzvidzora, pashure katatu oscillation, parameter itsva ,, anogona usimbiswe uye kuponeswa, AT chiedza unodzima, ari controller kuva Reset uye kupinda nokudzora wehurumende.
★ 6, Time kudzora basa (kana iri nguva & tembiricha kudzora):
Chekai nguva kuzvidzora divi chero nguva, nguva kudzokera pakutanga; Kana kuwana divi nguva kudzorwa, asi controller iyerere maererano kuisa nguva kuverenga pasi.
Ⅶ ,F ault A nalysis uye C learance
XMT * 608 nemafungiro yemhando kugadzirwa kwacho, uye tine kunyatsoomerera bvunzo asati asiya fekitari, achifara kuvandudza rakavimbika mita isu takanzwa pamurayiro inowanzobvunzwa mhosva anokonzerwa isiri kushanda kana parameter marongero .If iwe kuwana mhosva yaisagona kutsungirira, anyore izvozvo, uye kuonana navo pomutumwa kana isu. Sheet 7-1 ndiyo zvatinosiita mhosva XMT * 608 nezuva kushanda:
Sheet7-1 Common mhosva kwetsvina
★ kwokusafunga: kambani yedu kuchaita chigadzirwa ano, magadzirirwo Specification, zviri kusimbisa kuti chinhu.
Mabhii 1: Statement kuti parameter kutarisirwa mita kuti tsamba uye tsamba Chirungu
Previous: XMT-308 Series Universal Inzwa Zvinotaurwa Type Intelligent Temperature Controller
Next: XMT-808 Series Universal Inzwa Zvinotaurwa Type Intelligent Temperature Controller
Pid Temperature Controller For muchoto
XMZ-J8 Multi Way Intelligent Temperature Itiner ...
XMT-908P Series Intelligent programmable Eyl ...
EU-08 Universal Inzwa Zvinotaurwa Type Intelligent Tempera ...
XMT-9000 Series Single Inzwa Zvinotaurwa Type Intelligent ...
Digital Temperature Controller, Pid Temperature Controller For muchoto , 4-20ma Pt100 Temperature Transmitter, Pid Temperature Controller , Temperature Controller , Products All